Klever & nePolkadot isebenzisana ukwenza ithokheni yeDOT kwi Klever Indalo | Klever ezezimali
Klever & nePolkadot isebenzisana ukwenza ithokheni yeDOT kwi Klever i-ikhosistim
Klever yenza inkxaso yePolkadot Chain kuguqulelo lwamva nje lwe-Android, i-4.10.0 ye Klever yiprojekti
Klever wenze iiparamitha zePolkadot ngaphakathi kwi Klever yiprojekti; ezo mpawu ngoku ziyinxalenye KleverUhlaziyo olutsha lwe-4.10.0 lwe-Android.
Iimpawu ezintsha ziquka:
Polkadot Chain inkxaso
Polkadot Thumela/Fumana Ukuhamba
Ibhondi yePolkadot/UkuMisela okutyunjiweyo
I-Polkadot Browser Integration
yonke imigangatho Klever Ukusebenza kweWallet kunye nokuninzi.
kunye Klever I-Wallet, unokufumana ngokulula kwaye ngokukhuselekileyo kwaye uthumele usebenzisa i-DOT. Ukongeza, siye sasebenza umsebenzi wethu wokuTyala, olungele ukuthengisa iimveliso okanye ukuhlawula iinkonzo kwi-DOT.
I-Polkadot ngumthombo ovulekileyo, iprothokholi edibeneyo ye-multichain edibanisa kwaye ikhusele uthungelwano lwee-blockchains ezikhethekileyo, ezivumela ukuba zigqithise nayiphi na idatha okanye i-asethi, kungekhona nje iithokheni, kwaye ngoko ke ivumela i-blockchains ukusebenzisana. Injongo yePolkadot kukwenza inethiwekhi yebhloko ye-intanethi ebanzi, ebizwa ngokuba yiWeb3.
Iprothokholi yePolkadot yaziwa njengomaleko-0 imetaprotocol njengoko ichaza ubume kunye nefomathi yothungelwano lomaleko we-1 blockchains owaziwa njenge-parachains (amatyathanga afanayo). Ukongeza ekukwazini ukuhlaziya i-codebase yayo ngolawulo lwe-on-chain, i-Polkadot iyakwazi ukwenza oko ngokuzimeleyo kwaye ngaphandle kwefolokhwe.
I-Polkadot ixhasa iwebhu enikezelweyo apho abasebenzisi balawula umxholo wayo kwaye yenza lula ukudalwa kweenkonzo ezintsha, usetyenziso, kunye namaziko.
Ukusebenzisa i-protocol ye-Polkadot, amatyathanga kawonkewonke kunye nabucala, uthungelwano olungenamvume, i-oracles, kunye nobuchwepheshe bexesha elizayo banokudibaniswa, ukubonelela ngedatha engathembekiyo kunye nokwabelana ngokuthengiselana phakathi kwezi blockchains ezizimeleyo.
Injongo yemveli ye-DOT e-Polkadot iphindwe kathathu: ukubambelela kwimisebenzi kunye nokhuseleko, ukuququzelela ulawulo lwenethiwekhi, kunye nokubophelela amathokheni kwiiparachains.
Akukho kalo 4.68 Iivoti: 38